Dhakhaatiirta dalka oo wacad ku maray inay shaqo joojinta sii wadayaan | Star FM
Home Wararka Kenya Dhakhaatiirta dalka oo wacad ku maray inay shaqo joojinta sii wadayaan
Dhakhaatiirta dalka oo wacad ku maray inay shaqo joojinta sii wadayaan
Howlwadeenada caafimaadka ee dalka gaar ahaan saraakiisha isbitaallada kala duwan u qaabilsan bixinta daawooyinka ee ku mideysan dalladda KUCO iyo sidoo kale kalkaaliyaasha ayaa sheegay inaynan soo afjari doonin shaqo joojin qaran oo ay ku guda jireen in ka badan 37 cisho.
Tani ayaa timid ka dib markii dowladaha ismaamullada ay ku hanjabeen inay dhakhaatiirtan shaqada laga eryaya hadii sida ugu dhaqsiyaha badan aynan iskaga xaadirin goobihii ay ka howlgalayeen.
Hasa ahaate saraakiisha caafimaadka ayaa ku adkeysanaya inay Khasab tahay in la dhaqangeliyo qodobbo lagu heshiiyay .
Waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in laga haqabtiro agabka la iskaga difaaco cudurka COVID-19 oo tayo leh ee PPEs, in la siiyo lacago gunnooyin oo la xiriira halista shaqo iyo arrimo kale.
Golaha barasaabyada ismaamullada dalka ee CoG ayaa dhakhaatiirta ku eedeynaya inaynan diyaar u ahayn in la xalliyo tabashoyinkooda.
Hasa ahaate xoghayaha guud ee ururka KUCO George Gibore ayaa sheegaya inay golaha CoG u qoreen ilaa 5 warqadood balse aan ilaa iyo hadda loo soo bandhigin heshiis ay ku qanci karaan.
Previous articleCiidamo Gadoodsan oo Hakiyay isu socodka Magaalada Galinsoor ee Maamulka Galmudug
Next articleKenya oo aan la soo geli karin iyadoo uunan qofku sidan shahaadada COVID-19